Wood Timber Anticorrosive Treatment Tank - China Qingdao rakadzikama Machinery
Wood ari mhando zvipenyu zvipenyu, ine maitiro akanaka, ane zvakawanda akafanana mutema dzinongoitika zvigadzirwa, asi huni nyore chaizvo kuti vanotambura mujuru nezvimwe kukuvadza uye kurasikirwa dzokutengesa ukoshi. Zvisinei, chaiwo Anti-ngura Kuchengetedzwa Mabatirwo huni anogona kuremara ichi, uye achawedzera basa pehuni.
Mune namahwindo ezvinhu, vamwe pfungwa ngura nemishonga, moto nemishonga, värjäys mvura pashure Vacuum, mukuru kumanikidzwa, kakawanda, Frequency nevezera padondo kusvikira mukati sero, saizvozvo kunoita Anti ngura, nokuvhuvha, chitemamachira, kuvengwa juru uye nomurazvo retardant, värjäys etc.
Wood anticorrosive kurapwa tangi riri huni zvisaora kurapwa, ndiyo yakaoma kwacho rin'i, kambani maererano epamba huni kubudiswa uye kushandiswa. Production rakasiyana Specification matanda zvisaora tangi, zvose-kumativi matatu-dimensional kusangana mutengi kudiwa-siyana Anti-ngura.
The yepamusoro huni impregnation Kuchengetedzwa kusviba , k ane chiine anonzwisisa STRUCTURAL design, Kuvhiyiwa, yepamusoro mashandiro, simba pakawanda, huni kubudiswa vanokwanisa, midziyo selection, webetsero nguva vanoshanda iri ndokupfura, mukuru kushanda, kemikari marara, kugadzirwa mutengo pasi, uye haaiti anosvibisa mhoteredzo.
VOGA TIME kurapa VOLUME (m³)
KUFANANA (makirogiramu / ㎡)
Wood chichengetedzeso Machine
Zvomumagaba Food Processing Autoclave dzinodzikinyidza Sterili ...